SM Entertainment အနေနဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဘယ်လိုရှာတွေ့ခဲ့တာလဲ?(Part 1) | News Bar Myanmar
EXO Planet ကနေလာတယ်လို့ သိထားကြတဲ့ EXO members တွေအမှန်တကယ်တော့ ဘယ်လိုကနေစပြီး EXO အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာလဲဆိုတာသိကြပါသလား?
2011 January မှာSM Entertainment ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် Lee Soo Man ဟာ boy group အသစ်တစ်ခုကို ပွဲဦးထွက်လုပ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ December မှာပဲ မကြာခင်မှာ Debut လုပ်ပေးမယ့်အဖွဲ့ဟာ Exo Planet ကနေလာတဲ့ EXO ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်း SM Entertainment မှထုတ်ဖော်ကြေညာပေးလိုက်ပါတယ်။
2012 April မှာတော့ အဖွဲ့ဝင် ဆယ့်နှစ်ယောက်နဲ့ EXO ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးဟာ ပရိတ်သတ်ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ချောမောခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်တွေကြောင့် အခြားကမ္ဘာကလာတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းကလက်ခံနိုင်လောက်စရာဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးဟာ နေအခုလိုအဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်စုစည်းရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။
Xiumin ကိုတော့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာရှာတွေ့ခဲ့တာပါတဲ့။ 2008 က “Every-sing Contest” ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Emerald Castle ရဲ့ “Footsteps” ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆုကြေးငွေ $1,000 USD ရရှိတဲ့အပြင် SM Entertainment နဲ့ trainee contract ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
Life Bar အစီအစဉ်မှာ ပြောပြခဲ့တာကတော့ Xiumin ဟာ အဆိုတော်ဖြစ်လာရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ သူဟာတကယ်တော့ sports university တစ်ခုခုကိုသွားချင်တာဖြစ်ပြီး သီချင်းဆိုတာကတော့ ဝါသနာသပ်သပ်သာဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ပြိုင်ပွဲကိုလည်း ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါတဲ့။ Xiumin ဟာ 2008 ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ 2nd JYP Entertainment Open Audition မှာလည်း ဝင်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။
training ကာလအကြောင်းကို အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောပြခဲ့ဖူးတာကတော့ Training ချည်းပဲဆိုရင် မခက်ခဲပေမယ့် သူကအစားစားရတာအရမ်းကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဝိတ်လျှော့ဖို့အတွက်တော့ အရမ်းကိုကြိုးစားခဲ့ရတာပါတဲ့။ Xiumin ဟာ training ကာလ သုံးနှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာတော့ 2012 ခုနှစ်မှာ EXO ရဲ့အဖွဲ့ဝင်‌အနေနဲ့ ဖြစ်တည်လာခဲ့ပါတယ်။
Suho ကတော့ မူလတန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းက အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။ မိဘတွေကသဘောမတူခဲ့တဲ့အတွက် စာကိုသာကြိုးစားလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ အလယ်တန်းကျောင်းသားလေး Suho ဟာ ပန်းခြံမှာပရဟိတလုပ်အားပေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ club contest ကို ကြည့်ရှုဖို့လာတဲ့ SM Entertainment casting manager ကရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။
Suho audition ဝင်ပြိုင်လို့အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် agency မှာ trainee အဖြစ်နေဖို့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ မိဘခွင့်ပြုချက်ရပြီးတဲ့နောက် 2005 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ SM နဲ့ Trainnee စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Suho ဟာ အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ trainee သက်တမ်းအရှည်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Trainee ကာလအတွင်းမှာ စာကိုလည်းကြိုးစားလေ့လာခဲ့ပြီး Korea National University of Arts ကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါသေးတယ်။ 2012 ခုနှစ်မှာတော့ EXO အဖွဲ့က အားကိုးလေးစားရတဲ့ Leader ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ပရိတ်သတ်ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
Lay ကတော့ ဟိုးငယ်ငယ်ကလေးဘဝကတည်းက ဖျော်ဖြေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသူပါ။ ငယ်စဉ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ Lay ဟာ မွေးကတည်းကအရည်အချင်းပါလာသူလို့ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
SM Entertainment ရဲ့ casting associate တစ်ယောက်ဟာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက်လာရင်းနဲ့ Lay ကို မျက်စိကျခဲ့တာပါ။ 2008 October မှာတော့ Lay ဟာ K-Pop idol တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ကိုရီးယားမှာ Training စခဲ့ပါတော့တယ်။
EXO အနေနဲ့ debut မလုပ်ခင်မှာတော့ 2011 January တုန်းက SHINee concert မှာ Jonghyun ဒဏ်ရာရလို့ အစားထိုးအနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ 2012 မှာတော့ EXO အဖွဲ့ရဲ့ Chinese sub-unit EXO-M အနေနဲ့ debut ခဲ့ပါတယ်။
Baekhyun ကတော့မွေးရာပါ talent ရှိသူလို့ပြောရမှာပါ။ Debut မယ့် Group မှာပါဖို့အတွက် လေးလသာကြာခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ခုနစ်လအကြာမှာတော့ debut ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Baekhyun ရဲ့ Training သက်တမ်းဟာ ဆယ့်တစ်လသာကြာမြင့်ခဲ့တာပါ။
ကောင်းမှုတစ်ခုကြောင့်ရယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။ Baekhyun ဟာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်ရှိခဲ့ပြီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝကတည်းက Band ဖွဲ့ထားခဲ့ဖူးပြီး ဖျော်ဖြေမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် အရည်အချင်းရှိပြီးသား လူတစ်ယောက်ဆိုတာတော့ သိနိုင်ပါတယ်။
Baekhyun ဟာ audition တွေဝင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပဲ နောက်ဆုံးမှာတော့ SM Entertainment casting associate ကရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ Seoul Institute of the Arts ရဲ့ admission audition မှာ ဖြေဖို့အတွက် အသံစမ်းလေ့ကျင့်နေတဲ့ Baekhyun ကို မျက်စိကျခဲ့တာပါတဲ့။
Audition ပြီးနောက်ခြောက်လအကြာ 2011 မှာ SM Entertainment က trainee အနေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဖို့ Baekhyun ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ရုပ်ရည်ရော အရည်အချင်းပါ ပြည့်စုံနေတဲ့ Baekhyun ဟာ debut မယ့်အဖွဲ့ထဲပါသွားခဲ့ပြီး 2012 မှာတော့ EXO အနေနဲ့ အောင်မြင်စွာ ပွဲဦးထွက်နိုင်ခဲ့တာပါ။
Photo: EXO Official
Next ပရိသတ်တွေကို Jawdrop ဖြစ်သွားအောင် ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ Momo ရဲ့ ကကွက် (၅) ခု »
Previous « မြေခွေးလူသား ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာ အတူပါဝင်ကြမယ့် Girl's Day ရဲ့ Hyeri နှင့် Jang Ki Yong